Baarlamaanka oo codka kalsoonida siiyay Max'med Xuseen Rooble.
Saldhig kuyaal magaalada Beled Weyne oo weerar xooggan lakulmay.
Keydkii Shidaalka ciidanka Kenya ee Hoosingoow oo Weerar lagu gubay iyo warar kale.
Sawirro: Maamulka 'Somaliland' oo ciidamo dheeraad ah iyo gaadiid gaashaaman geeyay Tukaraq.
Melleteriga Maali oo madaxweyne KMG ah magacaabay.
Saturday August 08, 2020 - 12:13:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar hordhac ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta barqadii ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Jugta qaraxa oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu beegsaday saldhig melleteri ee kaabiga ku haya garoonka ciyaarah Muqdisho Stadium,
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa la sheegay in uu ka dhashay qaraxa oo adeegsaday gaari walxaha qaraxa lagasoo buuxiyay.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyaddan istish-haadiga ah oo lagu beegsaday saldhigga guutada 27aad taas oo aan ka fogeyn xaruntii Xisbiga ee degkada Wardhiigleey.
"Mujaahidiinta ayaa camaliyad istish-haadi ah ku beegsaday saldhigga guutada 27aad ee Murtiinta oo kutaalla dhabarka dambe ee xaruntii xisbiga waxaana jira khasaara xooggan oo isugu jiro dhimasho,dhaawac iyo burbur gaadiid" ayaa lagu yiri war si hordhac ah ugasoo baxay Al Shabaab.
Isbuucii lasoo dhaafay qarax ka dhacay nawaaxiga dekadda caalamiga Muqisho ayaa sababy dhimashada 9 qof waxaana muuqata in weerarada lagu beegsanayo meelaha xasaasiga ah ay kusii xoogeysanayaan inta badan degmooyinka gobolka Banaadir.